मेस्सीको खुट्टामा नेपाली जुत्ता ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»खेलकुद»मेस्सीको खुट्टामा नेपाली जुत्ता !
मेस्सीको खुट्टामा नेपाली जुत्ता !
By रबि धिताल on १ आश्विन २०७५, सोमबार १२:४९ खेलकुद
स्पेनिस बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लिओनल मेस्सी बेला–बेला नेपालसँग जोडिएर चर्चामा आउने गर्छन् । उनी खास गरी सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा नेपालसँग जोडिएका छन् । तर, यसपटक भने मेस्सीको नाम फरक विषयमा नेपालसँग जोडिएको छ । पछिल्ला केही दिनयता मेस्सीले नेपाली जुत्ता लगाएको विषयले चर्चा पाइरहेको छ ।
गत हप्ता ला लिगामा अवे खेल खेल्न रियल सोसिडाडको घरमा जाँदा मेस्सीले नेपाली शब्द देखिएको जुत्ता लगाएका थिए । उनले त्यस्तो जुत्ता लगाएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि एकाएक चर्चा बढको छ । मेस्सीले सधैं एडिडासले उत्पादन गरेको जुत्ता लगाउँछन् । उनी एडिडासको ब्रान्ड एम्बेस्डर भएकाले पनि उनले अन्य जुत्ता लगाउँदैनन् ।
सोही कम्पनीले करिब ११ महिनाअघि ‘फेरेल एक्स’ सेरिजको जुत्ता लन्च गरेको थियो । सोही सेरिजको जुत्ता लगाएर मेस्सी रियल सोसिडाड क्लब रहेको स्थान सान सेबास्टियन विमानस्थलमा देखिएका थिए ।चर्चाको विषय यो हो कि, उनले लगाएको दायाँ खुट्टाको जुत्तामा ‘संसार’ शब्द लेखिएको थियो । तर, उनले लगाएको देब्रे खुट्टाको जुत्तामा भने अंग्रेजी शब्द ‘इक्विलिटी’ लेखिएको थियो । मेस्सीले लगाएको उक्त जुत्ताको बजार मूल्य २ सय ५० अमेरिकी डलर पर्छ । हालसम्म मेस्सीले किन नेपाली भाषामा लेखिएको जुत्ता लगाए भन्नेबारे भने केही बताइएको छैन ।